Shi Jinpiing ofi jajjuun akka hinqabaannee NPC'nitti himan - BBC News Afaan Oromoo
Shi Jinpiing ofi jajjuun akka hinqabaannee NPC'nitti himan
Goodayyaa suuraa Xi Jiinpiing heggere Chaayinaaf mul'ata guddicha qaban dhiheessan.
Pirezidaantiin Chaayinaa Shi Jinpiing Chaayinaan guddinashee ilaalchisee of jajuu hinqabdu jechuun walgahii Kongrasii Ummataa Biyyaaleessaa NPC) irrattidubbataniiru.
Seenaa keessatti Chaayinaan yeroo jabaa keessa jirti sirna socialismii qofatu ishee oolchuu danda'a jechuun Obbo Shiin xumuraa walgahii mana marii kan wagga waggaan ta'u irratti dubbataniiru.
Taayiwaan keessatti warra argamaniifi haawwii fotooqsuutiin Chaayinaa adda baasuu barbaaadan ilaalchisees akkeekachiisaniiru.
Waggaa kana gumiin NPC aangoo Obbo Shi cimsuun, seera yeroo pirezidantummaa daanggeesuus kaasaniiru.
Jijjiramni kunis bara jireenya isaanii guutuu aangoo irra akka turaniif kan haala isaaniif aanjjeessuudha.
Gumiin NPC wagga waggaan ta'u kun waltajii siyaasa Chaayinaa keessatti bakka murteessa qaba.
Walgaii mana marii (paarlaama) waggaan walgahu kunis dhimmoota hoggantootaan dursamee murteefame kan raggaasisuudha.
Goodayyaa suuraa Seera baaftoonni gara fedhii uumata isaanii ta'uun akka murteessan prezidaantichi jabeesanii yaada kennan
Haasaa kana keessatti, Mr Shiin mul'ata guddicha Chaayinaaf qaban yoo ibsan, fedhii biyyatti akka ''daran haaromtu'' gochuun ''qaroomina fiduu irratti hirmaanaa guddaa qabdu'' akka itti fuftuu irra deebi'uun mirkaneessaniiru.
''Sirna soshaalistii qofti akka Chaayinaa oolchuu seenaan kanaan duras mirkaneesseera ammas itti fufee ni merkaneessa,'' jehuunis dubbataniiru.
''Gootootnii Chaayinaa dhugaan'' uumataa akka ta'e naan hubadha kan jedhan prezidaantichi, isaanis ta'e abbootiin siyaasaa biroon ''fedhii uumataa guutuuf jabaanne hojjechuu qabna'' jedhaniiru.
Itti fufuunis seenaa Chaayinaa keessatti raawwiilee hojii hojjetamanii kalaqa waraqaa irraa hanga baaruda qawweetti, darbees hanga ijaarsa gooroo guddichaa (the great wall) hanga ogbarrutti kan jirus tarreesaniiru.
Quba isaanii gara fedhii fi tilaammii Chaayinaan gita addunyaatti qabduutti qabaas, biyyikoo jabdu taati malee haala hintaaneen fayyadamuun dadhabbi biyyoota adduunyaa biroon kan of guddiftu hintaatu.
Yaa'ii Chaayinaa: Shi Jinpiing hoggantoota Chaayinaa haaraa beeksisanis nama isaan dhaalu ifa hin goone